Qoysaska - Cunnooyinka Lugaha
Sababta kale ee keenista cuntada waa fursad iskaa wax u qabso weyn: Waad la sameyn kartaa carruurtaada! Xaqiiqdii, waxaan ku dhiirri-galineynaa darawalada iskaa-wax-u-qabso ku shaqeeya inay carruurtooda ama carruurta ay sii dhaleen u soo kaxaystaan
Bixinta cunnada qoys ahaan waa hab fiican oo carruurta lagu baro barashada mas'uuliyadda bulshada iyo muhiimadda nafaqada. Bixinta cunno kulul iyo booqasho saaxiibtinimo sideed ilaa 10 waayeel iyo dadka naafada ah ee u baahan waxay qaadataa saacad kaliya saameynta aad sameynaysana waa mid aad u weyn.
Faa'iidooyinka aad bixisay waa kuwo la taaban karo oo fudud oo ku filan carruurta inay fahmaan. Waa ballan qaad yar oo dabacsan oo qoysaska u baahan oo kaliya saacad waxaadna sameyn kartaa bishiiba hal mar, inta lagu jiro fasaxyada dugsiga ama xilliga kuleylaha - markasta oo ay adiga kuu fiican tahay!
Dad badan oo qaata, booqashada maalinlaha ah ee tabaruceyaashu waa xiriirka kaliya ee aadanaha ee ay la yeelan doonaan maalinta oo dhan, markaa qiyaasi farxadda wejigooda ka muuqata markay soo dhoweeyaan carruurta dhoola cadeynaya! Waxay sidoo kale siinaysaa carruurta fursad ay ku dhistaan xiriirada waayeelka iyo dadka ka socda qaybaha kala duwan ee bulshadaada.
Saxiix maanta oo aad barataa sida adiga iyo qoyskaagu aad isbeddel dhab ah uga dhex samayn kartaan bulshada. Haddii aad qabtid su'aalo ku saabsan tabarucidda qoys ahaan naga soo wac (612) 623-3363 ama emayl iskaa wax u qabso [email protected].
Su'aalaha la Weydiiyo Tabaruceyaasha Qoyska
Qoyskeena ma yeelan doonaan waddo isku mid ah markasta oo aan cunno keenno?
Qoyskaaga ayaa codsan kara in isla dariiqa la maro markasta oo aad tabaruc ugu bixiso bixinta cuntada iskuduwaha barnaamijkuna wuxuu ku dadaalayaa sidii uu u aqbali lahaa codsigaaga. Haysashada waddo isku mid ah ayaa ah hab fiican oo lagu dhiso xiriiryo lala yeesho dadka qaata, taas oo faa'iido fiican u ah qoyskaaga.
Waxaan ka walwalsanahay in caruurtayda la geliyo kana soo baxo kuraasta baabuurtooda. Ma jiraan siyaabo lagu fududeyn karo tan?
Barnaamijyo badan ayaa bixiya fursado gaarsiin oo ku wada jira hal guri dabaq ah. Qaabkaas, in ilmahaaga la geliyo ama laga soo dejiyo kursiga gaariga ma noqon doonto arrin. Haddii aad su'aalo ka qabtid tan, nala soo xiriir halkan iskaa wax u qabso [email protected]ama wac (612) 623-3363.
Carruurtaydu waxay ku jiraan dugsiga inta lagu jiro usbuuca. Weli ma wada qaadan karnaa cuntooyin?
Xaqiiqdii! Hal fikrad ayaa ah inaad adigu keento cunnadaada markay iskuulka joogaan, ka dibna aad kala sheekaysatid khibradahaaga carruurtaada. Markaa waad awoodi doontaa inaad kaxaysatid inta lagu jiro xagaaga ama markay nasashada dugsiga leeyihiin.
Waa maxay cunugga ugu da'da yar ee aad kugula talin lahayd inaad la timaaddo dariiqa dhalmada?
Haddii aad tahay qofka kaliya ee qaangaarka ah, waxaad u baahan tahay inaad sugto illaa cunugaada uu gaariga ka dego oo uu albaabka u baxo isagoon la socon. Si kastaba ha noqotee, haddii adiga iyo waalid kale aad wada bixisaan, waxaad kolba markaba u tegi kartaan albaabka cunuggaaga ama carruurtaada, da 'kasta oo ay yihiin.
Cunto ma la geyn karnaa qoys kale?
Haa! Tani waxay si gaar ah ugu shaqeysaa qoysaska leh carruurta yaryar ee aan weli awoodin inay socdaan. Adiga iyo waalid kale ayaa kolba mid u kala wareegi kara albaabka.
Sidey reerkeygu uga faa'iideysan karaan khibradan iskaa wax u qabso ah?
Waxaan diyaarinay buug-gacmeed ku saabsan sida ugu badan looga faa'iideysan karo khibradaada cuntada ee qoyskaaga. Halkan waxaad ka heli kartaa talo wax ku ool ah oo ku saabsan gaarsiinta, hagitaan loogu diyaarinayo carruurtaada waayo-aragnimada, iyo layliyo ka turjumaya ka dib markaad cuntada keento. Bixinta cunnooyinka waxay u noqon kartaa waxqabad waxbarasho iyo isku xirnaan weyn qoysaska.
Ma jiraan fursado kale oo iskaa wax u qabso ah oo loogu talagalay qoysaska marka laga reebo keenista cuntada?
Haa! Bixinta cunnada ayaa ah baahideena ugu weyn ee iskaa wax u qabso, laakiin waxaan bixinnaa habab badan oo kale oo aan uga qayb qaadan karno. Fiiri kuwan dariiqooyin madadaalo ah oo fudud oo qoyskaaga uga qayb geli kara Cuntada Lugaha.
Fursadaha Tabaruca Qoyska
Bixinta cunnada ayaa ah baahida ugu weyn ee iskaa wax u qabso ah, laakiin waxaa jira dhowr siyaabood oo kale oo qoyskaagu u taageeri karo Cunnooyinka Cunnada.